Hanao ampamoaka ireo voarohirohy
Mbola hisy fihaonana hafa indray karakarain�ny FFM sy ny CSC ary ny foloalindahy anio. I Andry Rajoelina irery mantsy no tonga teny amin�ny hotely Carlton omaly tolakandro ka tsy nisy ny fanapahan-kevitra tapaka.
Lire la suite...	Albain Rabemananjara Ny FFKM no fara-fanantenana
Potika ny firenena. Miaiky izany ny rehetra. Kely ny finoana ny hahatafavoaka amin�izao krizy izao manoloana ny safotofoto sy ny fitiavan-tsezan�ny mpanao politika sasany izao.
Lire la suite...	Dolin Rasolosoa
Namikitra seza koa
Diso fanantenana ireo nitetika ny handray mora ny toeran�i Dolin Rasolosoa ao amin�ny Filankevitra ambonin�ny tetezamita na CST.
Lire la suite...	Donak'afo : Mampihorohoro, manakorontana
�Filaminana sy fihavanana, antoky ny fahombiazana�, izay indray no teny filamatra hankalazana ny asaramanitry ny 26 jona, nolanian�ny filankevitry ny governemanta omaly teny Mahazoarivo.
Lire la suite...	Omer Beriziky
Mampitandrina ireo mahery fihetsika
Hentitra ny fanambarana navoakan�ny governemantan�ny firaisam-pirenena tarihin�ny praiminisitry ny marimaritra iraisana Omer Beriziky omaly tolakandro manoloana ny fihetsika hafahafa nataona andian�olona, izay sady nanaratsy no nanompa tamin�ny alalan�ny sorabaventy no mbola namoaka teny tsy voahevitra ihany koa.
Lire la suite...	Magro Antsirabe Voakiana indray ny vondrona iraisam-pirenena
Voakiana mafy tao an-kianjan�ny Magro Antsirabe indray ny vondrona iraisam-pirenena ny alarobia 22 mey teo.
Lire la suite...	Randrianarimalala Julien Manohitra marindrano ny fivarotan-tanindrazana
Vahinin�ny Tia Tanindrazana anio Atoa Randrianarimalala Julien, mpanolotsaina manokan�ny Praiminisitra lefitra misahana ny toekarena sy ny indostria Botozaza Pierrot mipetraka any Amoron�i Mania sady mpandrindra ny hetsiky ny Zanak�i Dada ao amin�ny Distrikan�Ambositra. Hiompana manontolo amin�ny sehatry ny politika sy ny toe-draharaham-pirenena ny fanadihadiana niarahana taminy.
16/03/2012 Raharaha iray anisan�ny mitana ny sain�ny maro ny fitsarana ny raharaha BANI amin�ny alatsinainy 19 martsa ho avy io.
Ny vaovao farany re izao dia ho avy eny amin’ny Lapan’ny Fitsarana ireo manamboninahitra, mpikambana tao amin’ny Komity miaramila ho fanavotam-pirenena, voarohirohy tamin’iny raharaha iny, ary hanao ampamoaka lehibe mikasika ny fanonganam-panjakana 2009 ireo niara-dia tamin’ny FAT tamin’izany. Raha ny loharanom-baovao dia hafa no izay efa nambaran’ny lietnà-kolonely Charles Andrianasoavina tamin’ny desambra 2010 sy janoary 2011 no hambaran’izy ireo mandritra io fotoam-pitsarana io. Fa etsy andanin’izany dia adihevitra be ny hoe f’angaha tsy efa foana araka ny andininy faha-16 ao amin’ny tondrozotra niarahan’ny mpanao politika Malagasy nosoniavina ny 17 septambra 2011 ary efa navadika ho lalàna 2011-014 izy io, ny raharaham-pitsarana mikasika ny raharaha BANI, FIGN no mbola fohazina hatrany. Nangonin’i Jean D.